२०७७ मंसिर १५ गते सोमबार | eAdarsha.com
२०७७ मंसिर १५ गते सोमबार
सृजनात्मक कार्यमा मन रमाउनेछ । धन सञ्चय गर्न मन लाग्नेछ । सानातिना बाधा व्यवधान आएता पनि समस्यालाई छिचोल्दै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । व्यवसायबाट अपेक्षित लाभ मिल्दा खुसीयाली छाउने देखिन्छ ।
अघिदेखिका समस्या हल भएर जानेछन् । समय अनुकूलको रहेको छ । मान्यजनको साथ समर्थनले काम बन्नेछन् । बन्दव्यापारबाट आयआर्जन बढ्नेछ । विशेष कार्यमा सफलता मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा समेत सुधार हुनेछ ।
हचुवाको भरमा निर्णय लिँदा पछि पछुताउनु पर्नेछ । स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्नेछ । आफ्नै भन्नेले समेत धोका दिनेछन् । सजक रहनु होला । अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुरामा मन जानेछ । चिन्ता, पिर थपिनेछ ।
भौतिक सुखसुविस्ता उपभोग गर्न पाइनेछ । पढाइलेखाइमा चासो रहनेछ । नयाँ–नयाँ अवसरहरुले पछ्याउने छन् । कलात्मक कार्यमा मन जानेछ । व्यवसायमा नयाँ तौर–तरिकाको प्रयोगले आयदर बढ्नेछ ।
कार्य क्षेत्र प्रति समर्पित भइनेछ । विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ । सरकारी क्षेत्रका अपूरा काम कार्यले स्थान पाउनेछन् । मानसिक क्षमताको बृद्धिविकास हुनेछ । सामाजिक, राजनैतिक कार्यबाट प्रशंसा मिल्नेछ ।
सहज परिस्थिति बन्नेछ । बोलिकै भरमा धेरै कार्यहरु सरल तबरले बन्नेछन् । सामान्य मिहिनेतले नै लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ । धार्मिक कार्यमा सरीक भइनेछ । परोपकारी कार्यमा समय विताउन पाइनेछ ।
विपक्षीको विश्वासमा पर्दा नोक्सानी व्यहोर्नु पर्नेछ । एक्कासी स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ । अरुका काम कार्यमा भूल्दा आफ्ना महत्वपूर्ण कार्य भने पछि पर्नेछन् । आर्थिक पक्ष कजोर बन्दै बन्नेछ, सजक रहनु होला ।
अपरिचित व्यक्तिको सहयोगले महत्वपूर्ण कार्य बन्नेछ । मनोरञ्जनात्मक समारोहमा सहभागी भइनेछ । विश्वास दिलाउन सक्दा महत्वपूर्ण कार्यको नेतृत्व गर्न पाइनेछ । नोकरीमा प्रशंसा एवं जिम्मेवारी थपिनेछ ।
सामान्य झन्झटको मुकाविला गर्नु परेता पनि धनसंग्रह गर्ने खाले समय रहेको छ । व्यवसायमा गरेको लगानिले दिगो रुपमा फाइदा लिन सकिनेछ । साझेदारी काम कार्यबाट समेत उचित लाभ मिल्दा खुसी भइनेछ ।
बौद्धिक क्षमता फराकिलो बन्नेछ । पुराना समस्या हल भएर जानेछन् भने नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ । विद्या, बुद्धि स्थानमा स्थित चन्द्रमाले शैक्षिक क्षेत्रमा अग्रस्थानमा आइनेछ । सन्तानको साथ सहयोग मिल्नेछ ।
अधिक व्यस्थताका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउने छ । नविन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दा शंका र डरले सताउनेछ । विवाद पर्नेछ । मान्यजनको साथ समर्थनले कार्यको आरम्भ गर्दा केही मात्रामा सफल भइनेछ ।
साथीभाईको साथले गर्दा उच्च स्थान मिल्नेछ । कृषि क्षेत्रबाट मनग्य नाफा कमाइनेछ । हर्षको खबर सुन्न पाइनेछ । मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने खाले समय रहेको छ । काम गर्ने जोश जाँगर थपिनेछ ।
वि.सं. २०७७ साल मंसिर १५ गते सोमबार, तदनुसार ई.सं. २०२० नोभेम्बर ३० तारिख, प्रमादीनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, हेमन्तऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्लपक्षको पूर्णिमा तिथि दिवा २ः३३ बजेसम्म, त्यसपछि मार्गशिर्षकृष्णपक्षको प्रतिपदा तिथि रहनेछ ।
नक्षत्र रोहिणी भोलि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ ।
विष्कुंभादी योग शिव दिवा १२ः०२ बजेसम्म, त्यसपछि सिद्ध रहनेछ ।
आनन्दादी योग प्रर्वद्ध ।
करण बालव मध्यरात्रि पछि ३ः२२ बजेसम्म, त्यसपछि तैतिल रहनेछ ।
श्रीसूर्य बृश्चिक राशिमा, चन्द्रमा : वृष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ ।
सूर्योदय ६ः३८ बजे, सूर्यास्त : बेलुका ५ः०६ बजे ।